Ku saabsan Cunnooyinka - Cunnooyinka Taayirada
Cunnooyinka cuntada ee 'Wheels' waxaa laga sameeyaa mid cusub, iyadoo aan lahayn wax ka ilaaliya cuntada jikooyinka ku jira. Cunnooyinka ugu badan ee ay bixiyaan 32-ka barnaamij ee xubinta ka ah waxay ka yimaadaan Jikada Fursadaha, oo aan ku wada shaqeyno iskaashiga Open Arms of Minnesota.
Laba ikhtiyaar oo geyn ah
Maalin kasta: Cunugayaga maalinlaha ahi waxa uu bixiyaa wax ka duwan maalin kasta oo bisha ah oo si joogto ah u wareegta. Cuntada waxaa keena tabaruce saaxiibtinimo oo diyaar u ah in la cuno wakhtiga qadada.
Toddobaadle Qaboojiye: Ka dooro in ka badan 30 ikhtiyaar oo macaan miiskeenna Toddobaadlaha ah ee La Qaboojiyey. Meelo badan oo ka mid ah barnaamijka Twin Cities, waxaad ka dooran kartaa cuntada aad rabto inaad isku daydo markaad dalbanayso. Cunnooyinku waxay la yimaadaan tilmaamo kululeynta fudud, oo waxaa la geyn karaa maalin adiga kuu fiican.
Waxaan la shaqeyneynaa cuntadaada
Haddii aad u baahato, fursado ayaan haysannaa. Waxaan bixinnaa ikhtiyaarro-aan-lahayn, laaktoos-la'aan, khudaar iyo vegan xulashooyinka iyada oo sidoo kale la jaanqaadaysa inta badan cuntooyinka caafimaadka. Cunnooyinka oo dhami waa kuwo caafimaad qaba wadna u leh sokorowga. Renal, cunto farsamo ahaan jilicsan iyo saafi ah ayaa sidoo kale la heli karaa.
Liiskayaga toddobaadlaha ah ee la qaboojiyey waxaa ku jira liiska Latino-dhiirigeliya iyo kuwa Aasiyaanka dhiirrigeliya. Xulashada Kosher iyo xalaasha ayaa sidoo kale la heli karaa.
Diyaar ma u tahay inaad Cunto on Wheels la siiyo isku day ah? Saxiix hadda.
Diyaar ma u tahay inaad Cunto on Wheels la siiyo isku day ah? Halkan ka bilow.
Cuntooyinka Toddobaadlaha ah
Cuntooyinka Maalinlaha ah
Guji astaanta kore si aad u kala shaandhayso.
Meejka gu'ga 2022
Casho Turki ah oo duban
Samee maalin kasta Thanksgiving! Turkiga, maraq, digirta cagaaran, walxaha lagu daray koob miro ah iyo buskud.
Tetrazzini turkey baastada ukunta leh broccoli, tufaax la dubay iyo buskud.
Cunto Xalaal ah (Menu Rotating)
Food on Wheels ayaa hadda bixinaysa cuntooyin kala duwan oo Xalaal ah iyadoo lala kaashanayo Adeegyada Kobcinta Bulshada! Menu waxa ku jira ari qunyar loo dubay, suqaar digaag, kalluun iyo suxuun khudaar ah oo ay ku jiraan xawaashka dhaqameed ee Soomaalida.
Sandwich Quraac ah
La kala daadiyay ukun, sausage turkey iyo farmaajo on muffin Ingiriisi ah oo la siiyay koob miro ah iyo tufaax la dubay.
Hash browns oo lagu jajabiyey ukun dhaldhalaalaan oo la siiyay qamadi ingiriis oo dhan ah iyo isteroberi la dubay.
Dheriga lo'da duban
Dheriga hilibka lo'da ee caadiga ah roast served la baradho shiidan, digir iyo karootada, duudduuban casho iyo buskud.
Hilibka hilibka ee caadiga ah oo lagu daray baradho shiidan, khudaarta Kaalifoorniya, koob miro ah iyo duub casho.
Sisinta Noodles iyo Doofaarka
Baastada sisinta iyo hilibka doofaarka oo leh baastada oo dhan oo qamadi ah ayaa lagu adeegaa tufaax la dubay iyo koob biyo ah.
Basbaaska dambaska ah oo ay ku raran yihiin digir, galley iyo yaanyo, oo lagu daray bariiska Isbaanishka, karootada iyo koob khudaar ah.
Kalluunka soyka sinjibiil ayaa la siiyay bariis bunni ah oo leh isku -darka khudradda Aasiya, sabab tufaax ah iyo buskud.
Kalluunka Mahi Mahi ee la dubay ayaa lagu adeegaa baastada ukunta waxaana lagu kariyey maraqa kareemka isbinaajka. Waxaa lagu darsaday khudaarta Talyaaniga iyo pudding.
Hilibka doofaarka macaan ee Hmong
Hilibka doofaarka macaan ee Hmong oo lagu dubay maraqa soyka macaan ee bariiska buniga ah. Waxaa lagu adeegaa broccoli, suugo tufaax ah iyo buskud nasiib leh.
Digaag iyo bariis u qaabaysan Mexican oo lagu daray khudradda California iyo buskud.
Digaagga u eg Fiyatnaamiis ee marinade sinjibiil-lime ah oo lagu adeegay bariis bunni ah. Wuxuu la yimaadaa digirta cagaaran, tufaaxa iyo macmacaanka.
Caanaha Laas -Laaska ee Blueberry Oatmeal
Oatmeal macaan oo dhadhan fiican leh ayaa la barbar dhigay ukunta la ruxruxay, koob miro ah iyo pudding.
Hilibka doofaarka ee Laatiin-dhiirigeliyey
Hilibka doofaarka ee Laatiin-ka loo waxyooday oo leh suugo chimichurri cagaaran, oo la siiyay digir madow iyo bariis, galley macaan, koob miro ah iyo buskud.
Lo'da Cuba oo leh digir madow iyo bariis, galley, koob miro iyo buskud.
Digaagga Qaabka Hmong
Durbaanka digaaga ee qaabka Hmong-ka oo aad u macaan ayaa lagu daray cagaarka khardal, bariis bunni ah iyo koob pudding ah.
Waxaa lagu adeegaa karootada la jarjaray, muffin galley ah iyo tufaax. Muffin galley waxaa ku jira gluten.
Ham oo la dubay ayaa lagu cadeeyay dhalo mustard-apple
Maraq digir macaan leh oo lagu daray bariis cad iyo karootada, oo ay la socdaan koob khudaar ah iyo buskud.
Digaag leh Swiss iyo Mushrooms
Digaag ayaa lagu shiiday jiis Swiss ah iyo boqoshaada la dubay, oo lagu daray pilaf bariiska duurjoogta ah, isku darka khudradda California, koob miro iyo buskud.
Digaag la jarjaray ayaa lagu shubay maraqa chipotle yaanyo oo la siiyay bariis bunni ah oo ay weheliyaan digir iyo buskud.
Digaag duban Laatiin
Waxaa loogu adeegay sariir bariis bunni ah oo leh digir madow, 4-khudaar iyo koob miro ah.
Hilibka Digaagga Koonfur-galbeed
Saxanka digaaga ee Koonfur-galbeed oo leh bariis Isbaanish ah iyo galley iyo salsa digir madow ah. Waxaa lagu adeegaa isku dhafka khudradda iyo koob khudradeed.
Kalluunka la dubay ee mustard
Kalluun geedo khardal ah oo lagu daray basbaaska, khudradda khudradda ah iyo buskudka sonkorta
Casharka Curry ee Turkiga
Turkiga iyo khudaar ku jira maraqa curry oo lagu daray bariis bunni ah, brokoli iyo macmacaan.
Baasto leh maraqa Hilibka
Baasto iyo suugo hilib ah oo lagu daray brokoli iyo karootada labadaba, iyo buskud.
Hilibka hilibka lo'da ee Salisbury oo lagu miiray maraqa boqoshaada oo lagu dhejiyay baasto ukun korkeeda. Waxaa lagu adeegaa karootada iyo maraqa tufaaxa.
Toonta Parmesan Loin Doofaarka
Dhexda doofaarka casiir leh oo leh qolof toon ah oo parmesan ah. Waxaa lagu adeegaa baradho macaan oo la shiiday, digir cagaaran, fersken diirran oo la jarjaray iyo duub casho ah.
Sausage Talyaani Ku Dubi
Dubi ukunta sausage talyaani oo ay weheliso tufaax la dubay iyo muffin Ingiriis ah.
Doofaarka Al Wadaad
Hilibka hilibka doofaarka ee Meksikaanka ah, hilib doofaar la jarjaray oo lagu daray chile iyo uunsi, oo lagu daray bariiska Isbaanishka, karootada ilmaha iyo koob khudradeed.
Digaag badeed iyo barar
Digaag dhuuban oo la shiiday oo la shiiday, oo lagu dul dhigay sariir couscous ah, oo ay la socoto miro khudrad ah, fersken diirran oo la jarjaray iyo buskud.
Hilibka Toonta Malabka
Digaag toon ah oo malab ah oo lagu daray baradho duban, galley, duub casho ah iyo cananaaska la jarjaray.
Eeg Cuntooyin Badan